Galoofisyada maqaarka dhaadheer ee adkeysiga u adkeysanaya shumaca badbaadada dabka Soosaarayaasha iyo alaableyda | Joysun
Galoofyada maqaar gacmeedka dhaadheer ee adkeysanaya
Lambarka Moodalka: WCBD03
Magaca badeecada: galoofyada maqaarka dheer ee adkeysiga u leh galoofyada galoofyada badbaadada dabka
Isticmaalka: Dabka iyo u adkeysiga kuleylka
Furayaasha Shaqada: Alxanka Kuleylka Adkaysi, Caabidayaal Adkaysi, galoofyada BBQ, Dabka.
Kartida Bixinta: 20 000 Lammaanaha Bishiiba
Midabka Badeecada: madow + cawl
Cabirka: 40CM / 16 INCH Length
Waxyaabaha: Garabka maqaarka la xushay oo kala go'ay Maqaar, xumbo buuxda iyo dahaarka cudbiga gudaha
Xidho iska caabin:Iyada oo tolinta dunta Kevlar waarta si loo hubiyo nabadgelyadaada iyo adkeysiga kulaylka u adkaysta. Suulka iyo baabacada oo lagu xoojiyay gacmaha barkinta markaad ku shaqeyneyso miisaan culus ama walxo fiiqan.
DIIDAYNE kululaa:Garabka la xushay ee ilaalinta maqaarku waxay u qaybsan tahay gubashada gacmahaaga taabashada walxaha kuleylka badan ama dabka. safka xumbada iyo marada shaashadda lagu daboolo kuleylka, dhuuq dhidid iyo raaxo lagu daray.
Naqshad debecsan:Naqshadeynta calaacasha iyo suulka baalka oo xoojiyay dabacsanaanta ugu badan. Micnaheedu waa inaad alaab haysato oo aad si fudud ugu shaqeyso.
JOYSUN galoofyada ma aha oo kaliya alxanka, laakiin sidoo kale waxay u adeegsadaan shaqooyinka kale iyo howlaha guriga. Fikrad ku saabsan alxanka galoofyada, galoofyada shaqada, galoofyada amaanka, galoofyada adkeysiga u adkeeya, galoofyada BBQ, galoofyada kaamiyada ah, galoofyada iska caabinta ee adag, galoofyada dabka.
Maqaarka la xushay ee maqaarku kala jabay
Madow + cawl
Hal cabir (40 * 13 * 2.5cm)
0.70kg / lammaane
41 * 15 * 3cm / lammaane, 10pairs / boorsada opp
MULTI - Ujeeddo: Iyagu maahan oo keliya alxanka laakiin sidoo kale waxay faa'iido u leeyihiin shaqooyin kale oo badan iyo shaqooyinka guriga. Fikrad ku saabsan alxanka galoofyada, galoofyada shaqada, galoofyada macdanta, galoofyada adkaysi u leh galoofisyada, galoofyada iska caabida, galoofyada dabka glo galoofyada BBQ
Hore: PVC Jarmal ah oo Labo Jeex ah oo Labo Jeexan Leh Ayaa Dhammeeya Gacan-gashiyada Ragga
Xiga: Ciribtir gacmo gashi gacmo gashi gacmo gashi dahaarka dhabarka
Galoofyada Shaqada maqaar dheer
Galoofyada darawalka maqaarka doofaarka ee DPAS
buluug dabo maqaar dheer iyo kuleyl badbaado adkeysi leh ...
CAPL368 galoofyada timireed ee maqaarka maqaar
WCBR03 galoofyada maqaarka ee alxanka casaanka ah ayaa xoojiyay calaacasha
Suuf Cawil Taranka Ka Shaqeynta Gacmo gashi